Blogging | The World of Pinkgold
Blog Seminar in Commemoration of Blog Day 2010
Posted on September 1, 2010 by cuttiepinkgold
It’s been three years since Myanmar Blogger Society organized its first blog seminar on Blog Day 2007. I still remember that rainy day that we all were so busy and active for our ever first blog seminar. “Why do We Blog?” got its success winning over 600 audiences and made to increase quiteanumber of Myanmar blogs after the seminar. MBS is the first organization in Myanmar that reveled the blogs asaplatform for sharing everything to everyone.
The day comes again now. Myanmar Blogger Society is planning to organize ICT Seminar and Workshop on Sep 13 and 14, 2010 at MICT in commemoration of World Blog Day 2010. The event is organized by MBS in cooperation with MCPA. We all invite all interesting persons to attend the seminar and discuss in workshop. Pls see more on MBS Website.
Filed under Blogging, Social Concern and tagged Blog Day, MBS |	Leaveacomment
Posted on September 5, 2009 by cuttiepinkgold
သမိုင်းတွေ ရာဇ၀င်တွေကို ကျွန်မ စိတ်မ၀င်စားလှပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေတော့ စာအုပ်နဲ့ မျက်နှာမခွာချင်လောက်အောင် စွဲလမ်းနှစ်သက်စရာ ကောင်းပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း သမိုင်းတွေကို ဖတ်ရတာဟာ တစ်ကယ်ကို ငြီးငွေ့စရာကောင်းတယ်လို့ ကျွန်မ ထင်မိသေးတယ်။ သမိုင်းတွေကို စိတ်မ၀င်စားတဲ့ ကျွန်မဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာသာမက မြန်မာ့သမိုင်းမှာလည်း ဘာဗဟုသုတမှ မရှိလောက်အောင်ကို နည်းပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှေးဟောင်းမြို့တော်တွေကိုသွားရင် ကျွန်မ လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးလေးတော့ ခံစားရတတ်သားရှင်။ ရခိုင်ပြည် ဝေသာလီမြို့ဟောင်းနဲ့ ပုဂံကိုသွားတုန်းကဆိုရင်လည်း ကျွန်မရင်ထဲမှာ ဆို့နင့်သလိုကြီး ခံစားရပြီး ငိုချင်စိတ်တွေ အလိုလိုဖြစ်လာခဲ့သေးတယ်။ သမိုင်းကိုစိတ်မ၀င်စားတဲ့ ကျွန်မ၊ ရာဇ၀င်တွေကို လျစ်လျူရှုတတ်တဲ့ ကျွန်မကို ရှေးဟောင်းမြို့တော်တွေက ငိုအောင်လုပ်နိုင်တာတော့ နည်းနည်းထူးဆန်းနေသေးတယ်။ ငိုချင်စိတ်တွေကပဲ ကျွန်မကို တစ်ခုခုစိတ်ဝင်စားအောင်များ အစပျိုးစေခဲ့သလား မပြောတတ်ပါဘူး။ ရှေးဟောင်းမြို့တော်တွေကို ကျွန်မ တမ်းတမ်းတတကို သွားချင်နေမိတတ်သေးတယ်။ သွားခွင့်ရဖို့ အခွင့်အရေးတွေကိုလည်း ကျွန်မ စောင့်မျှော်နေတတ်သေးတာပေါ့။ ကျွန်မဟာ ခေတ်တစ်ခေတ်တုန်းက လူမျိုးစုတွေနဲ့များ အဆက်အစပ်ရှိလေသလားလို့လည်း ရူးကြောင်ကြောင် တွေးမိတတ်ပါသေးရဲ့။
“ငါတို့ သရေခေတ္တရာကို လေ့လာရေး သွားကြမယ်”
ကိုညီလင်းဆက်ရဲ့ စကားအဆုံးမှာ စတားကိုလာကို ခေါင်းငုံ့ သောက်နေတဲ့ ကျွန်မ ရုတ်တရက် ခေါင်းထောင်သွားခဲ့တယ်။ စိတ်ဝင်စားမှုတွေက လှိုက်ခဲတက်လာတယ်။ တစ်ခုခုတော့ ထူးခြားတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိလည်း ၀င်လာခဲ့တယ်။
“ဟေးးးးးးးး ပျော်စရာကြီး.. ဟုတ်တယ် အဖွဲ့လိုက်ကြီး ခရီးထွက်ရတာ သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းမှာပဲ..”
မထိုက် ရဲ့ ထောက်ခံအားပေးတဲ့အသံ၊ တစ်ခြား သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ “မိုက်တယ် မိုက်တယ်” ဆိုတဲ့ အားတက်သရော ရှိလှတဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေကြောင့် ကျွန်မတို့တွေ သရေခေတ္တရာ လေ့လာရေး ခရီးစဉ်ဆိုတာကို စီစဉ်ဖြစ်ကြတယ်။ ကျွန်မတို့တွေဆိုတာက ဘလောဂ့်ဂါတွေပေါ့။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်စာမျက်နှာ တစ်ခုမကကို ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ စာရေးဆရာတွေ၊ နည်းပညာရှင်တွေ၊ ကဗျာဆရာတွေ၊ ရောက်တတ်ရာရာလေးတွေ ရေးတဲ့သူတွေ ပေါင်းစုထားသူတွေပေါ့။ သရေခေတ္တရာကို သွားရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က သြဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ဘလောဂ့်ဒေး အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လေ့လာရေး ခရီးစဉ်တစ်ခုအဖြစ် သွားရောက်ကြမှာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မ ရင်တွေ ခုန်လာတယ်။ အပျော်တွေ စတင်စီးဆင်းတယ်။ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မျက်နှာကို တစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်တယ်။ အားလုံးက သရေခေတ္တရာကို သွားချင်နေကြတဲ့ ဆန္ဒတွေကိုယ်စီရှိနေတာကို အပီအပြင်တွေ့ရတယ်။
“ဒါဆို ထက်တို့ သရေခေတ္တရာ ခရီးစဉ်အတွက် Trip Plan လေး ဆွဲရအောင်၊ တစ်ခြားဘလောဂ့်ဂါတွေလိုက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း သတင်းတွေ များများဖြန့်ရမယ်လေ… ကားလည်းငှားရအုံးမှာ၊ အစားအသောက်တွေ၊ ပြီးတော့ တီရှပ်လည်း ထုတ်ကြမယ်.. တစ်ယောက်ချင်းစီ တာဝန်ခွဲလုပ်ကြမယ်နော်”
တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆို အမြဲစိုးရိမ်စိတ်ဝင်တတ်တဲ့ ကျွန်မ ခရီးစဉ်အတွက် အစီအစဉ်တွေကို ကြိုတင်ချမှတ်နေမိတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပဲ ဦးဆောင်ပြီး ဘယ်သူက ဘာလုပ်ဆိုတဲ့ တာဝန်တွေကို ခွဲဝေပေးလိုက်တယ်။ ခရီးစဉ်ကို လူများများနဲ့ အဆင်ပြေပြေထွက်ဖြစ်အောင်လည်း ကျိတ်ဆုတောင်းလိုက်မိသေးတယ်။ ဆင်တူအက်ျီတွေနဲ့ ခရီးသွားရမယ့် အဖြစ်ကိုလည်း စိတ်ကူးတွေ ဖမ်းယဉ်လိုက်သေးတယ်။ သရေခေတ္တရာ…. ပြည် မြို့နားမှာ ရှိတယ်ဆိုတာကလွဲလို့၊ ပန်ထွာဘုရင်မနဲ့ ဒွတ္တဘောင်းမင်းကြီး ရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာကလွဲလို့ ကျွန်မ ဘာမှ မသိခဲ့ဘူး။ သာသနာ စတင်ထွန်းကားရာနေရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေ နိဒါန်းချီတဲ့ နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ခပ်သဲ့သဲ့တော့ ပြောသံကြားဖူးပါသေးရဲ့။ ဒီမြေကို ကျွန်မ တစ်ကယ်သွားရတော့မယ်။ နောက်ထပ်ရှေးဟောင်းမြို့တစ်ခုဆီ ကျွန်မ ရောက်ဖြစ်တော့မယ်။ သရေခေတ္တရာရေ… ကြိုလင့်ပါတော့ကွယ်။ Read the rest of this entry →
Filed under Blogging |	35 Comments
Blogger Gathering is Successfully Finished
Posted on August 29, 2009 by cuttiepinkgold
ကျွန်မတို့ တစ်လတိတိ မီတင်ပေါင်းများစွာ လုပ်ပြီး စီစဉ်ခဲ့ရတဲ့ Blogger Gathering and Blogging Excursion ရဲ့ ပထမပိုင်း အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ Gathering ကတော့ ဒီနေ့မှာ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံး ခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲလေးကို စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ကန်တော်ကြီးမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ဖူးမြင်ဖူးနေကျဖြစ်သော ဘလောဂ့်ဂါများသာမက၊ မတွေ့ဖူး မမြင်ဖူးသော ဘလောဂ့်တွေလည်း လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံပွဲလေးမှာ စုစုပေါင်း ဘလောဂ့်ဂါ သုံးဆယ့်ငါးယောက် လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။
မနက်ဆယ်နာရီမှာတော့ ကျွန်မတို့တွေ ကရ၀ိတ်ကျွန်း အ၀င်ဝမှာ လူစုကြပါတယ်။ နောက်တော့ ကန်တော်ကြီး ကလေးကစားကွင်းအနီး မြေကွက်လပ်တစ်ခုကို သွားရောက်ကြပြီး ဘလောဂ့်ဂါ အချင်းချင်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ဂိမ်းဆော့ခြင်း၊ Debate လုပ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အစတုန်းက Role Play တွေပါ ဆော့ဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့ပေမယ့် လူစုတာ နည်းနည်း အချိန်ကြာသွားတဲ့အတွက် ဒီအစီအစဉ်ကို မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးရှင်။ ဆော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂိမ်းလေးကတော့ Blogger ဖွက်တမ်းလို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဂိမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
ဘလောဂ့်ဂါတွေရဲ့ နာမည်ကိုတွေ လက်ဟန် ခြေဟန် အမူအရာတွေနဲ့ ဖွက်ပြီး အမည်ဖော်ရတဲ့ ဂိမ်းလေးပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ရုပ်ရှင်ဖွက်တမ်း ကစားခဲ့သလိုပါပဲ။ အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆော့ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ ဆော့ပြီးတော့ နေ့လည်စာ စားသောက်ကြပါတယ်။ နေ့လည်စာ စားပြီးတဲ့ အခါမှာ စောစောက အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကပဲ Debate အစီအစဉ်များကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Debate လုပ်ခဲ့တဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေကတော့
Debate ပြီးသွားတော့ ကျွန်မတို့ လက်ရှိစုဝေးနေတဲ့ နေရာမှာ နေနည်းနည်းပူနေတာတဲ့ ချစ်သူကျွန်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ချစ်သူကျွန်းမှာလည်း ဆော့ခဲ့ကြ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဘလောဂ့်ဂါ သားဖြိုးကလည်း ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းတွေ ဆိုပြခဲ့ပါတယ်။
ရှုံးတဲ့ အဖွဲ့ကို နိုင်တဲ့ အဖွဲ့က ကြိုက်ရာ လုပ်ခိုင်းလို့ ရတယ်လို့ ဒိုင်လူကြီးက ပြောတာနဲ့ လက်တွေကို မဖြည်နိုင်တဲ့ ကျွန်မတို့အဖွဲ့ကတော့ နိုင်တဲ့ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ ခိုင်းတာတွေကို မရှက်တမ်း လုပ်ပြခဲ့ရပါသေးတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ အားလုံးစုပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီနေ့ည (10) နာရီမှာတော့ ပြည်မြို့ကို Blogging Excursion အနေနဲ့ ထွက်ခွာကြအုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွား အတွေ့အကြုံလေးတွေကို စောင့်မျှော် ဖတ်ရှုကြပါအုံးနော်။
(Photo Credit to Kyaw Nyo Thway)
(Photo Credit to Nyi Lynn Seck)
Filed under Blogging |	16 Comments
Blog Day 2009 and Blogging Excursion
Posted on August 5, 2009 by cuttiepinkgold
2009 ခုနှစ် သြဂုတ်လ (31) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ဘလောဂ့်ဒေး အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဘလောဂ့်ဂါ တွေ့ဆုံပွဲနှင့် လေ့လာရေး ခရီးစဉ်တစ်ခုကို ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာသာမက. မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ ရှိကြတဲ့ ဘလောဂ့်ဂါတွေ စုံစုံညီညီ တက်ရောက်ပါဝင် ဆင်နွှဲနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ရှိနေကြတဲ့ ဘလောဂ့်ဂါတွေလည်း တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။
နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ခုအနေဖြင့် သရေခေတ္တရာ ၊ ပြည်မြို့ကို Blogging Excursion တစ်ခုအနေနဲ့ သွားရောက်လေ့လာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီခရီးစဉ်ကို Shrikittaya 2.0 လို့ အမည်ပေးထားပြီး.. ခရီးစဉ်မှာ လိုက်ပါကြမယ့် ဘလောဂ့်ဂါတိုင်းကို နှစ်သက်ကြည်နူးစေမယ့် အစီအစဉ်တွေ ထပ်မံထည့်သွင်းပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ လာရောက်ဆင်နွှဲလိုကြတဲ့ ဘလောဂ့်ဂါများအားလုံးအနေဖြင့် ပွဲကိုလာမယ့်အကြောင်းကို သြဂုတ်လ (22) ရက်နေ့ကို နောက်ဆုံးထားပြီး Register ပြုလုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Register ပြုလုပ်တဲ့အခါ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Registration Fees ကိုပေးဆောင်ရပါမယ် ဆိုတာလေးကိုလည်း သိစေချင်ပါတယ်ရှင်။ Registration Fees ကောက်ခံရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ခရီးသွားလာဖို့အတွက် စီစဉ်စရာလေးတွေကို အဆင်ပြေပြေစီစဉ်နိုင်အောင် ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ MBS ကို ၀င်ရင် ပေးရမယ့် ၀င်ကြေးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာလည်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။
Filed under Blogging and tagged Blog Day |	7 Comments